Dowlada Mareykanka oo ka hadashey geerida Abwaan Xudeydi - Awdinle Online
Dowlada Mareykanka oo ka hadashey geerida Abwaan Xudeydi
April 8, 2020 (Awdinle Online) –Alle ha naxariistii waxaa magaalada London ku geeriyooday Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudeydi) oo ahaa rug caddaa dhinaca fanka iyo muusigga ah,isaga oo maalmihii la soo dhaafay la xanuun sanayay Cudurka Coronavirus.
Qoraal kasoo baxey safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa loogu tacsiyadeeyey Ehelada iyo Asxaabtii uu ka baxey Abwaan muusigiiste Axmed Ismaaciil Xuseen (Xudeydi) .
“Nasiib darro Soomaaliya waxay weyday fannaan caan ah iyo bare faneed oo u geeriyoodey Cudurka COVID19. Danjire Yamamoto iyo Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho waxay tacsi u dirayaan ehelkii iyo asxaabtii Axmed Ismaaciil Xudeydi ayaa lagu yiri”Qoraalka Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.
Ugu dambeyn Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay sii wado la socoshada iyo badqabka xaalada Caafimaad ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Xudaydi waxa uu dhashay Magaalada Berbera Sanadkii 1928-kii, waxaana uu jirey 92 sano, isagoo ku dhawaad qarnigaa ahaa tiir aan liicin oo uu leeyahay fanka Soomaalidu, waxaa uuna aad can ugu ahaa tumidda muuusigga, gaar ahaan Cuudka.
Previous articleMaqaal: Saxaafad Madaxbannaan Ma Tahay lafdhabarka Dimuqraaddiyada?
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Sh/ Hoos ”Cadaaladda ayaan horkeyneynaa dadkii dhibka geystay”